CFD ထရေးဒင်း & အမေးအဖြေများမှကျွမ်းကျင်သူများကလမ်းညွှန် | CFD ထရေးဒင်းကို Safe ဖြစ်ပါသည် - စတော့အိတ်အွန်လိုင်း Investing
CFD ကုန်သွယ် ပို. ပို. လူကြိုက်များနေ့စဉ်ဖြစ်လာနေသည်။ ဒါပေမယ့်ဘယ်လိုအတိအကျအလုပ်လုပ်နှင့်အားသာချက်များနှင့်အားနည်းချက်များကိုဘာတွေလုပ်နေလဲသနည်း? ကျနော်တို့ကဒီပြည့်စုံ CFD ကုန်သွယ်လမ်းညွှန်အတွက် Difference ကုန်သွယ်များအတွက်စာချုပ်နှင့်ဆက်စပ်သောအားလုံးသင့်ရဲ့မေးခွန်းများကိုဖြေပါ။
Difference သည်တစ်ဦးကကန်ထရိုက် (CFD) စာချုပ်အချိန်တွင်ကုန်သွယ်မှုထဲသို့ဝင်သောအခါတစ်ခုပိုင်ဆိုင်မှုတန်ဖိုးနှင့်၎င်း၏တန်ဖိုးကိုအကြားခြားနားချက်ကိုတွက်ချက်ခြင်းဖြင့်ရောက်လာခြင်းဖြစ်သည်။ အဆိုပါကုန်သည်ကတကယ်တော့အခြေခံပစ္စည်းပိုင်ဆိုင်မထားဘူး။ ယင်းအစားအဆိုပါ CFD နောက်ခံပိုင်ဆိုင်မှု၏စျေးနှုန်းလှုပ်ရှားမှုတွေပြန်ပါသည်။ ယူအနေအထားပေါ် မူတည်. အဆိုပါကုန်သည်ပိုင်ဆိုင်မှု၏စျေးနှုန်းတက်လှုံ့ဆော်ပေးသည့်အခါအမြတ်ဝင်ငွေသို့မဟုတျ, စျေးနှုန်းစာချုပ်အချိန်တွင်ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းသွားခဲ့သည်လျှင်အရှုံးခံရပါလိမ့်မယ်။ Difference များအတွက်စာချုပ်များအမြဲငွေသားထက်တစ်မြင်သာထင်ပိုင်ဆိုင်မှုအခြေချနေကြသည်။
CFD ကုန်သွယ်ပါတီနှစ်ခုတစ်ဦးဝယ်နဲ့ရောင်းသူတစ်ဦးလိုအပ်သည်။ အဆိုပါစာချုပ်ရောင်းသူအခြေခံပိုင်ဆိုင်မှုတိုး၏စျေးနှုန်းလျှင်စာချုပ်အချိန်တွင်သဘောပေါက်ခြားနားချက်ပေးဆောင်ကြောင်းဖော်ပြထားသည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, စျေးနှုန်းကျဆင်းမှုလျှင်, ဝယ်ခြားနားချက်ပေးဆောင်ပါလိမ့်မယ်။ ဘဏ္ဍာရေးတူရိယာအတွက်ကုန်သွယ်မှုဖို့ ပို. ပို. လူကြိုက်များနည်းလမ်းတွေထဲကတစ်ဦးအဖြစ်, CFDs နောက်ပိုင်းမှာဖုံးလွှမ်းလိမ့်မည်သည့်အားသာချက်များတဲ့အရေအတွက်ကဆက်ကပ်။
ကုန်သွယ် CFDs ၏ကောင်းကျိုးများ
CFD အမြတ်အစွန်း taxable ဖြစ်ပါသလား
သင် USA တွင် CFDs ကုန်သွယ်မှုနိုင်သလား?
ဘယ်လို CFDs စျေးနှုန်းလဲ?
ဘယ်လို CFD ပွဲစားများငွေရှာသလဲ?
ငါ CFDs ကုန်သွယ်မှုသငျ့သလော
သငျသညျ CFDs ကုန်သွယ်မှုမပြုလုပ်သင့်ဘယ်မှာသာဓကများပါဝင်သည်:
ဘယ်အချိန်မှာ CFDs သက်တမ်းကုန်ဆုံးသလဲ?
ဘယ်အချိန်မှာ CFD တီထွင်ခဲ့သလဲ
- စျေးနှုန်းမေးကြည့်ပါ - ဤရောင်းသူများကကိုးကားစျေးနှုန်းဖြစ်ပါတယ်။
- စျေးနှုန်း Bid - ဤတစ်ဝယ်လုံခြုံရေးအဘို့အဆပ်ဖို့ဆန္ဒရှိစျေးနှုန်းဖြစ်ပါတယ်။
- Spread - ဤမေးဖို့စျေးနှုန်းနှင့်လေလံစျေးနှုန်းအကြားကွာခြားချက်ဖြစ်ပါတယ်။
- Margin - ဤသင်တစ်ဦးကုန်သွယ်မှုဝင်ရောက်သည့်အခါရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်လိုအပ်နေတဲ့ငွေပမာဏကိုရည်ညွှန်းသည်။ ဒါဟာသင်၌ရောင်းဝယ်ဖောက်ချင်သောအခြေခံပိုင်ဆိုင်မှု၏လက်ရှိတန်ဖိုးကတစ်ရာခိုင်နှုန်းအဖြစ်တွက်ချက်ပါတယ်။
သငျသညျတခု $ 33.46 ၏စျေးနှုန်းကိုမမေးနှင့်အ 100 ရှယ်ယာကိုဝယ်ခြင်းငှါဆုံးဖြတ်ထားပြီးတဲ့စတော့ရှယ်ယာများတွင်ရောင်းဝယ်ဖောက်ချင်ဆိုပါစို့။ လိုအပ်သောစုစုပေါင်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု $ 3346 ဖြစ်လိမ့်မည်။
သငျသညျ 50% ၏အနားသတ်ရာပူဇော်သက္ကာကိုအစဉ်အလာပွဲစားမှတဆင့်အရောင်းအဝယ်ဖြစ်ခဲ့ကြလျှင်, သင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖို့မျှော်လင့်ထားလိမ့်မည်ဟုပမာဏကို $ 1673 ပါလိမ့်မယ်။ 5% အဖြစ်အနိမ့်ဖြစ်နိုင်သည်ကိုအခြားတစ်ဖက်ကမ်းလှမ်းမှုကိုမာဂျင်ပေါ်အွန်လိုင်း CFD ပွဲစားများ။ ဒါဟာသင် $ 167.30 ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်, ဒီကုန်သွယ်မှုများအတွက်ကိုဆိုလိုပါတယ်။
တူညီသောစတော့ရှယ်ယာများအတွက်လေလံစျေးနှုန်းပြန့်ပွား $ 33.50 ဖြစ်လိမ့်မည် $ 0.04 ကြောင်းကိုစိတ်ထင်။ သငျသညျကုန်သွယ်မှု entry ကိုမှာယူအနေအထားကိုပြန့်ပွားဖို့နဲ့ညီမျှဆုံးရှုံးမှုကိုပြသပါလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့်စတော့ရှယ်ယာဟာ breakeven စျေးနှုန်းမှာဖြစ်အနည်းဆုံး4ဆင့်တို့ကတန်ဖိုးထားရပေမည်။
စတော့ရှယ်ယာဈေးနှုန်းတန်ဖိုးထားဆက်လက်နှင့် $ 33.96 တစ်ဦးလေလံစျေးနှုန်းရောက်ရှိ, သငျသညျယခု $ 50 အမြတ်အစွန်းမှာရောင်းချနိုင်မယူဆ။
ဒါဟာသင် 1.49% ၏အလားအလာပြန်လာဝင်ငွေနိုင်သည်ကိုဆိုလိုသည်။ သို့သော်ထိုသို့ CFD အကျိုးဆောင်များကကိုးကားပြန့်ပွားသည့်ထက်ပိုကြီးတဲ့ဖြစ်လာဖွယ်ရှိကြောင်းယူဆဖို့ပိုပြီးလက်တွေ့ကျမယ့်
အမှန်တကယ်ပြန့်ပွားစတော့ရှယ်ယာစျေးကွက်တွေမှာကိုးကား။ ထို့ကြောင့်မဟုတ်ဘဲ $ 33.96 ထက်, လေလံစျေးနှုန်းအမှန်တကယ် $ 33.94 ဖြစ်လိမ့်မယ်။ သင်ဤစျေးနှုန်းမှာရောင်းချလျှင်, သင်နေဆဲ $ 48 အမြတ်ဝင်ငွေတာပေါ့။ သင့်ရဲ့ $ 167.30 ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကို အသုံးပြု. တွက်ချက်လိုက်တဲ့အခါဤသူသည်သင်တို့တစ် 26.89% ပြန်လာရရှိခဲ့ပါပြီဆိုလိုသည်။
ဆဲခြင်းဖြင့်ကိုးကားရဲ့အဘယ်အရာကိုများအကြားပြန့်နှံ့ကွဲပြားခြားနားမှုယူဆ CFD အကျိုးဆောင် နှင့်အမှန်တကယ်စတော့ရှယ်ယာစျေးကွက်, အပွဲစားကိုးကားထားတဲ့ကိုမေးစေခြင်းငှါ,
အနည်းငယ်ပိုမိုမြင့်မားရဲ့စျေးနှုန်း $ 33.48 ပြောကြပါတယ်။ တောင်မှထို့နောက်သင်ဆဲကအောင်မြင်သောင်လျှင်သင့်ရဲ့ကုန်သွယ်မှုကနေအမြတ်အစွန်းရစေတာပေါ့။
ဒါကြောင့်အဘယျကွောငျ့ CFD ပွဲစားကိုးကားလိုတစ်ဦး slightlyhigher ရဲ့စျေးနှုန်းနှင့်ထဲမှာကိုးကားရဲ့အဘယ်အရာထက်အနည်းငယ်နိမ့်မယ့်တစ်ဦးလေလံစျေးနှုန်းကိုမေး စတော့ဈေးကွက်?
အတော်များများက CFD ပွဲစားကုန်သည်ပြန့်ပွားငွေပမာဏကိုပေးဆောင်စေခြင်းအားဖြင့်ငွေရှာ။ မေးပါများနှင့်လေလံဆွဲစျေးနှုန်းအကြားအဆိုပါသေးငယ်တဲ့ကွဲပြားခြားနားမှုဖို့ရည်ရွယ်ထားပါသည်
သူတို့ကိုအရောင်းအပေါ်ဆုံးရှုံးမှု minimize ကို enable ။
သြဇာအကျိုးဆောင်တစ်ဦးကုန်သွယ်မှုထဲသို့မဝင်ရရန်အလို့ငှာ၌သင်တို့ကိုချေးငှားသည်ပိုက်ဆံပမာဏကိုရည်ညွှန်းသည်။ ဒါကပွဲစားတစ်ဦးကုန်သွယ်မှုသို့မဝင်ခင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်သင့်အားလိုအပ်သည်ပိုက်ဆံအနည်းဆုံးပမာဏကိုဆိုလိုသောအနားသတ်၏ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ပါတယ်။ သင် 100 ရှယ်ယာဝယ်ယူ 3346% တစ်ဦးရဲ့ margin နှင့်အတူ, $5တစ်ဦးမြို့တော် outlay လိုအပ်ပါတယ်ကတည်းက, သင်ပွဲစား "ချေးငွေများ" နေချိန်မှာ $ 167.30 ရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖို့ပါလိမ့်မယ်, အပေါ်ကကျန်ရှိသော $ 3178.70 ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဥပမာအသုံးပြုခြင်း။
တစ်ဦးကနိမ့်အနားသတ်သင်တစ်ဦးကုန်သွယ်ရေးအပေါ်ပိုပြီးပိုက်ဆံ "ချေး" နှင့်သင်၏ကိုယ်ပိုင်ပိုက်ဆံလျော့နည်းအန္တာရာယ်နိုင်သည်ကိုဆိုလိုသည်။
ဤသည်ကုန်သွယ်မှုနှုန်းအမြတ်အစွန်းအလားအလာတိုးပွားစေပါသည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, ပိုမိုမြင့်မားသြဇာလည်းသင့်ရဲ့ဆုံးရှုံးမှုချီးမြှင့်နိုင်ပါ။
CFD ကုန်သွယ်, သင်ထိတ်ပါဝင်သည်ကြောင်းဘဏ္ဍာရေးတူရိယာ, ဘဏ္ဍာတိုက်, ငွေကြေးမှ access ကိုပေးသည်ကဏ္ဍ CFDs, အညွှန်းကိန်းများနှင့်ကုန်စည် cryptocurrencies ။ အွန်လိုင်း CFD ပွဲစားများကိုသင်ကမ္ဘာလုံးအနှံ့အားလုံးအဓိကစျေးကွက်မှရယူပေးပါ။ နေသမျှကာလပတ်လုံး aspecific စျေးကွက်ဖွင့်လှစ်သည်အတိုင်း, သင်ပွဲစားရဲ့ပလက်ဖောင်းကနေတဆင့်အဲဒါကို access နိုင်ပါလိမ့်မယ်။
အတော်များများကဘဏ္ဍာရေးစျေးကွက်ကုန်သည်များ၏အားနည်းချက်ဖြစ်ကြောင်းထားတဲ့စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကို shorting ပါပြီ။ ဥပမာအားဖြင့်, တိုတောင်းသွားမယ့်ရန်သင့်အားဖော်ထုတ်စေခြင်းငှါ,
ကွဲပြားခြားနားသောအနားသတ်သို့မဟုတ်ပင် requiret ဦးထုပ် (သင်မှ ပို. မြို့တော် outlay လိုအပ်ပါတယ်ရာ) သင်အစပိုင်းတွင်အဆိုပါတူရိယာချေး။
ဤစည်းမျဉ်းအတိုမယ့်အနေဖြင့်ကုန်သည်များတားဖို့ရည်ရွယ်နေကြသည်။ CFD စျေးကွက်ယေဘုယျအားဖြင့်အရှင်ဤကဲ့သို့သောစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေချမှတ်ကြပါဘူး
သင့်ရဲ့အကျိုးဆောင်များကထောက်ပံ့ပေးအမိန့်အမျိုးအစားသင်အန္တရာယ်စီမံခန့်ခွဲနိုင်ပုံကိုကောင်းစွာဆုံးဖြတ်၌ရှည်လျားသောလမ်းကိုသွားပါလိမ့်မယ်။ ခေတ်သစ် CFD ပွဲစားများအတူတူပူဇော်
သင့်ရဲ့အစဉ်အလာပွဲစားတို့ကထောက်ပံ့ပေးသောသူတို့သည်အဖြစ်အမျိုးအစားများကိုအမိန့်။ ဤရွေ့ကားမှတ်တိုင်များနှင့်ကန့်သတ်ပါဝင်သည်။ တချို့ကပွဲစားများကိုလည်းအခကြေးငွေမှာအာမခံချက်မှတ်တိုင်များပေးပါလိမ့်မယ်။
အဖိုးအခနှင့်ကော်မရှင်အလွယ်တကူသင့်ရဲ့ဝင်ငွေရရှိမှုသို့ကိုစားနိုင်ပါတယ်။ CFD စျေးကွက်ပွဲစားကုန်သည်များပြန့်ပွားငွေပမာဏကိုပေးဆောင်စေခြင်းအားဖြင့်ဝင်ငွေဝင်ငွေထိုကဲ့သို့သောပုံဖွဲ့စည်းခဲ့နေကြသည်။
CFDs နေ့ကကုန်သွယ်အတွက်အရောင်းအဝယ်ဖြစ်တဲ့အခါမှာတစ်ဦး option တစ်ခုဖြစ်သည်။ တချို့ကစျေးကွက်သင်တစ်နေ့လျှင်အရောင်းအဦးရေအများဆုံးပမာဏကိုနေရာသို့မဟုတ်ပင် capson သင်တစ်နေ့လျှင်အရောင်းအပေါ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံနိုင်ပါတယ်မြို့တော်ပမာဏကိုနေရာလိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။
တစ်ဦး CFD ကုန်သွယ်အကောင့်ဖွင့်လှစ်များသောအားဖြင့်ပေမယ့်အကြောင်းကို $ 1000 ၏နိမ့်ဆုံးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလိုအပ်ပါတယ်
CFD ပွဲစားကုန်သည်များပြန့်ပွားငွေပမာဏကိုပေးဆောင်စေခြင်းအားဖြင့်ဝင်ငွေဝင်ငွေ။ ဒါဟာသင့်ရဲ့အနိုင်ရအရောင်းအပေါ်ရှိသင့်ဝင်ငွေရရှိမှုကိုလျှော့ချအဖြစ်အရောင်းအဆုံးရှုံးအပေါ်ဆုံးရှုံးမှုပမာဏကိုတိုးမြှင့်မည်ဖြစ်သည်။ သို့သော်စွဲချက်တင်ပြန့်ပွားငွေပမာဏကိုများသောအားဖြင့်အတော်လေးအနည်းငယ်မျှသာရှိသည်။
ထိုကဲ့သို့သော binary options များကုန်သွယ်အဖြစ်တချို့ကစျေးကွက်မြင့်မားမှုကြောင့်လိမ်လည်မှုမြင့်မားအဖြစ်အပျက်တွေမှစည်းမျဉ်းသတ်မှတ်နေကြသည်။ CFD ကုန်သွယ်, အခြားတစ်ဖက်တွင်အလွန်အမင်းစည်းမျဉ်းသတ်မှတ်မထားပါနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ဖို့ပွဲစားကိုရွေးချယ်ခြင်းသည့်အခါရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေသတိထားရရန်အကြံပြုပါသည်။
သူတို့ရဲ့ဂုဏ်သတင်းကိုစစ်ဆေးမယ့်ယုံကြည် cfd ပွဲစားသို့မဟုတ် cryptocurrency ပွဲစားကိုရှာ A ကောင်းဆုံးလမ်း
နှင့်စံချိန်အဖြစ်သူတို့ platform ပေါ်တွင်ပူဇော်မတူညီသော features တွေခြေရာခံ။
သူတို့ဟုတ်ပါတယ်။ CFDs အတွက်ထရေးဒင်းသင်အမြတ်ဝင်ငွေချင်သောယူဆတယ်။ ထိုကဲ့သို့သောဗြိတိန်နှင့်သြစတြေးလျနိုင်ငံများတွင်မှာတော့ရရှိခဲ့သည်အမြတ်အစွန်းမြို့တော်အကျိုးအမြတ်အခွန်အဖြစ်ကုသနေကြသည်။
CFD ကုန်သွယ်ဝင်ငွေသင့်ရဲ့အဓိကအရင်းအမြစ်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်, အမြတ်အစွန်းဝင်ငွေခွန်အဖြစ်ကုသနိုင်ပါသည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, CFDs အရောင်းအဝယ်ဖြစ်စဉ်မြှုတ်ဆုံးရှုံးမှုကိုဖန်ဆင်းမဆိုအကျိုးအမြတ်ကိုထေမိရန်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
သင်အမှန်တကယ်အခြေခံပိုင်ဆိုင်မှုများကိုပိုင်ဆိုင်ကြဘူးကတည်းက CFDs တံဆိပ်ခေါင်းတာဝန်ကနေကင်းလွတ်ခွင့်ရသည်။
သင့်ရဲ့ CFD အမြတ်အစွန်းလည်း taxable ဖြစ်လိမ့်မည်ပဲဖြစ်ဖြစ်သင့်ရဲ့နေထိုင်ရာတိုင်းပြည်များနှင့်မည်မျှအမြတ်အစွန်းကိုသင်တစ်နှစ်လျှင်ဝင်ငွေပေါ်တွင်မူတည်သည်။
CFDs ဝယ်ယူရောင်းချခြင်းသငျသညျထိုကဲ့သို့သောတံဆိပ်ခေါင်းခွန်အဖြစ်အခွန်ပေးဆောင်သည်ဟုမလိုအပ်ပါဘူး။ ဒီအကြောင်းပြချက်ကိုသင်ကုန်သွယ်ခံရသည့်အခြေခံပစ္စည်းပိုင်ဆိုင်ကြဘူးဆိုတာပါပဲ။ သို့သော်ကုန်သွယ်ထံမှသင်တို့ဝင်ငွေအမြတ်အစွန်းတရားအားဖြင့်ပေးအဖြစ်သူတို့တစ်တွေသတ်သတ်မှတ်မှတ်နိမ့်ဆုံးကိုရောက်ရှိပေးအခွန်ကောက်ခံမှုမှဘာသာရပ်ဖြစ်လိမ့်မယ်။
ထရေးဒင်း CFDs လုံခြုံစဉ်းစားသည်။ သို့သော်, သင့်ပိုက်ဆံအန္တရာယ်ကင်းသို့မဟုတ်မရှိမရှိဆုံးဖြတ်ရန်မည်သည့်နှစ်ခုကိုအဓိကအချက်များရှိပါသည်။
ပထမဦးစွာသင်နှင့်အတူရင်းနှီးမြှုပ်နှံအကျိုးဆောင်စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်သို့မဟုတ်မရှိမရှိစဉ်းစားပါ။ သငျသညျဗြိတိန်အတွင်းအရောင်းအဝယ်ဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်ဥပမာအားဖြင့်, သင့်ပွဲစားဥရောပအတွင်းဘဏ္ဍာရေးကျင့်အာဏာပိုင် (FCA) သို့မဟုတ် CySEC နေဖြင့်စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်တာဖြစ်ပါတယ်ရှိမရှိစဉ်းစားပါ။
ဒုတိယအချက်အသငျသညျ CFD ကုန်သွယ်ချဉ်းကပ်ပုံကိုစဉ်းစားပါ။ မည်သည့်ဘဏ္ဍာရေးစျေးကွက်နှင့်အတူအတိုင်း, သင်တို့၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆုံးရှုံးများ၏အလားအလာရှိပါတယ်။ အကောင်းတစ်ဦးကုန်သွယ်မဟာဗျူဟာ၏အသံသုတေသနနှင့်အသုံးပြုမှုသင်အန္တရာယ် minimize လုပ်ဖို့ခွင့်ပြုပါလိမ့်မယ်။
သင်တို့သည်လည်းဤကဲ့သို့သောကန့်သတ်အဖြစ်ပွဲစားပေး tools တွေကိုသုံးပါနှင့်ဆုံးရှုံးမှု minimize လုပ်ဖို့ရပ်သင့်တယ်
လောလောဆယ် CFD ကုန်သွယ်ယူအက်စ်အေအတွင်းခွင့်ပြုမထားပေ။ ထိုကဲ့သို့သော Dodd ဖရန့်အက်ဥပဒေအဖြစ်ဥပဒေအကြီးအကျယ် CFDs အပါအဝင်တန်ပြန်ဘဏ္ဍာရေးတူရိယာကျော်၏ကုန်သွယ်အပေါ်ကန့်သတ်ထားတော်မူ၏။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, လက်ရှိတွင် SEC နှင့် CFTC နေဖြင့်စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်မတူညီသောဖလှယ်မှုကိုအမေရိကန်နိုင်ငံသားများမှ CFDs ပူဇော်ကြပါဘူး။
သည်အခြားဘဏ္ဍာရေးစျေးကွက်နှင့်အတူကဲ့သို့ပင်အကြီးအကျယ်ပိုက်ဆံကုန်သွယ် CFDs အောင်ဘယ်လိုကောင်းစွာသင်အပေါ်မူတည်
CFDs ၏သက်တမ်းကုန်ဆုံးသည့်ရက်စွဲကိုသင်အရောင်းအဝယ်ဖြစ်နေတူရိယာအမျိုးအစားပေါ်မူတည်ပါသည်။ အဆိုပါသက်တမ်းကုန်ဆုံးသည့်ရက်စွဲဒါပေါ်လတိုင်းအဆုံးသည်လေးပုံတစ်ပုံဖြစ်နှင့်နိုင်ပါတယ်။
အဆိုပါသက်တမ်းကုန်ဆုံးသည့်ရက်စွဲများသောအားဖြင့်သင့်ရဲ့အကျိုးဆောင်များကညွှန်ပြနေသည်။ သက်တမ်းကုန်ဆုံးရက်စွဲများရှိသည်သောဘုံ CFDs ရေနံ, သဘာဝဓာတ်ငွေ့နှင့်ကြေးနီပါဝင်သည်။
သင်သက်တမ်းကုန်ဆုံးသည့်ရက်စွဲမှာပွင့်လင်းအကောင့်ရှိပါကကြောင့်လာမယ့်ကုန်သွယ်သံသရာကူးလှိမ့်ပါလိမ့်မယ်။ သူတို့တစ်တွေငွေသားထုတ်ကုန်များကဲ့သို့ပြုမူဆက်ဆံနေကတည်းကအခြားတစ်ဖက်တွင်, အ CFDs အများစုအနေနဲ့သက်တမ်းကုန်ဆုံးသည့်ရက်စွဲမရှိကြပါဘူး။ ဒါဟာသင်နေသမျှကာလပတ်လုံးကိုသင်ချင်ပါတယ်အဖြစ်များအတွက်အနေအထားကျင်းပရန်ခွင့်ပြုပါတယ်။
CFD စျေးနှုန်းများတစ်ဦးအထူးသဖြင့်အညွှန်းကိန်းသို့မဟုတ်ပိုင်ဆိုင်မှုများအတွက်နောက်ခံစျေးကွက်၏သူတို့အား mirror ဖို့ဒီဇိုင်းနေကြသည်။ သို့သျောလညျး, သငျသောလေလံသတိထားမိနှင့်တစ်ဦး CFD များအတွက်စျေးနှုန်းကိုမေးတိကျတဲ့အချိန်ကပွဲစားမှပွဲစားများထံမှကွဲပြားပါလိမ့်မယ်ပါလိမ့်မယ်။
ဤသည်စျေးနှုန်းရှိရာတစ်ဦး "တရားမျှတတန်ဖိုးကို" အစိတ်အပိုင်းအတွက်အကျိုးဆောင်အချက်များပြီးနောက်မှာရောက်ရှိလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်
ဝင်ငွေထုတ်လုပ်သူတို့ရဲ့အဓိကနည်းလမ်းကုန်သည်ပြန့်ပွားငွေပမာဏကိုပေးဆောင်ရာတွင်ပါဝင်သည်။ များစွာသောသာဓကထဲမှာ, ပွဲစားများကကိုးကားပြန့်ပွားငွေပမာဏကိုကိုးကားရဲ့အဘယ်အရာနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အနည်းငယ်ပိုကြီးကြောင်းသတိပြုရကျိုးနပ်ဒါဟာင်
Difference များအတွက်စာချုပ်နှစ်ခုပါတီများ (ဝယ်နှင့်ရောင်းချသူ) အကြားစာချုပ်အဖြစ်ဖော်ပြနေတဲ့ဘဏ္ဍာရေးဆင်းသက်လာသည်။
တစ်ဦး CFD ၏စျေးနှုန်းကုန်သွယ်ခံရသည့်အခြေခံပစ္စည်းများ၏စျေးနှုန်းပြန်ပါသည်။ ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်တစ်ဦး CFD ဝယ်ယူမ
ဤသည်ခြားနားချက်ကုန်သွယ်ရေးသက်တမ်းကုန်ဆုံးမှာကုန်သွယ်မှု entry ကိုနှင့်၎င်း၏စျေးနှုန်း၏အချိန်မှာ CFD ၏စျေးနှုန်းနုတ်အားဖြင့်ရောက်ရှိသည်။
CFD ထိတ်တရားဝင်ဗြိတိန်, ဂျာမနီ, အီတလီနှင့်သြစတြေးလျအပါအဝင်နိုင်ငံအတော်များများအတွက်အသိအမှတ်ပြုထားပါသည်။
သို့သော်ကြောင့်အချို့ဒေသများမှာသူတို့ရဲ့အလွန်အမင်းကိုစည်းကမ်းတသဘောသဘာဝရန်, လိမ်လည်မှု CFD ပံ့ပိုးပေးအွန်လိုင်း operating နေကြသည်။
ဒါဟာဂရုတစိုက်သင်တို့ငွေကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းမပြုမီကွဲပြားခြားနားသော CFD ပွဲစားများသုတေသနရန်ထို့ကြောင့်အကြံပြုလိုတယ်ပါပဲ။
လူအတော်များများ CFD ကုန်သွယ်လောင်းကစားဝိုင်းတစ်ပုံစံကြောင်းငြင်းခုန်လိမ့်မယ်။ သို့သော်ကွဲပြားခြားနားမှု၏နံပါတ်ရှိပါသည်။
လောင်းကစားများနှင့် CFD ကုန်သွယ်နှစ်ဦးစလုံးတင်းကျပ်စွာနိုင်ငံအများအပြားအတွက်စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်နေကြသော်လည်း, ဤစက်မှုလုပ်ငန်းများထိန်းညှိအလောင်းများကိုများသောအားဖြင့်ကွဲပြားခြားနားပါသည်။
ထရေးဒင်း CFDs သေးငယ်တဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေကနေကြီးမားတဲ့အမြတ်အစွန်းစေရန်အခွင့်အလမ်းများဖွင့်ဖွင့်လှစ်။ သငျသညျ CFDs အတွက်အရောင်းအဝယ်ဖြစ်စဉ်းစားသင့်သည့်အကြောင်းရင်းတချို့ကပါဝင်သည်:
1 ။ သငျသညျသြဇာကိုကျေးဇူးတင်သေးငယ်တဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်အတူကုန်သွယ်ရေးအပေါ်ကြီးမားတဲ့အမြတ်အစွန်းကိုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
2 ။ သင်ကနောက်ခံပိုင်ဆိုင်မှုကိုပိုင်ဆိုင်ပေမယ့်အမှန်တကယ်ပိုင်ဆိုင်မှုပိုင်ရှင်ထိုကဲ့သို့သောမြတ်များနှင့်အကျိုးစီးပွားချိန်ညှိရတဲ့အဖြစ်ရရှိသွားတဲ့အကျိုးကျေးဇူးများများစွာကိုမရကြဘူး။
3 ။ CFD စျေးကွက်သည်အခြားဘဏ္ဍာရေးစျေးကွက်နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်မြောက်မြားစွာကန့်သတ်မရှိကြပါဘူး။
သို့သော် CFD ကုန်သွယ်သင်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဘဏ္ဍာရေးစျေးကွက်၏ကောင်းတစ်ဦးနားလည်မှုရှိသည်လိုအပ်ပါဘူး။
1 ။ သငျသညျကုန်သွယ် CFDs တားမြစ်သည်ဘယ်မှာတိုင်းပြည်တစ်နိုင်ငံသားပါပဲ။
2 ။ သငျသညျဘဏ္ဍာရေးတူရိယာအရောင်းအဝယ်ဖြစ်မရှိကြိုတင်အတွေ့အကြုံကိုသို့မဟုတ်အသိပညာရှိသည်။
CFD Difference များအတွက်စာချုပ်အတိုကောက်အနေနဲ့အတိုကောက်ဖြစ်ပါတယ်။
တစ်ဦး CFD ၏သက်တမ်းကုန်ဆုံးသငျသညျအရောင်းအဝယ်ဖြစ်နေနောက်ခံပိုင်ဆိုင်မှုပေါ်တွင်မူတည်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်, သင်၌အရောင်းအဝယ်ဖြစ်နေလျှင်
တစ်ဦး CFD ၏သက်တမ်းကုန်ဆုံးသည့်ရက်စွဲများသောအားဖြင့်သင့်ရဲ့အကျိုးဆောင်များကထောက်ပံ့ပေးနေပါသည်။
CFDs အဆိုပါ 1990s အတွက်ဘရိုင်ယန် Keelan နဲ့ Jon Wood ကအားဖြင့်လန်ဒန်မြို့ရှိတီထွင်ခဲ့ကြသည်။ သူတို့ရဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်လန်ဒန်စတော့အိတ်ချိန်းတွင်ထိတ်ခတ်ဖို့ထိတွေ့မှုကနေကုန်သည်များနှင့်ခြံရန်ပုံငွေများစောငျရနျးဖို့ဖြစ်တယ်။
Difference များအတွက်စာချုပ်များသည်ယနေ့ရရှိနိုင်သောလူကြိုက်များသောကုန်သွယ်ဘဏ္ဍာရေးတူရိယာတဝတည်းဖြစ်ကြ၏။ တစ်ဦး CFD ကုန်သည်အဖြစ်, သင်အလွယ်တကူကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဘဏ္ဍာရေးစျေးကွက်မှဝင်ရောက်ခွင့်ရဖို့နဲ့သေးငယ်တဲ့ငွေပမာဏကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြင့်ကြီးမားသောအမြတ်အစွန်းစေရန်သြဇာကိုသုံးနိုင်သည်။
CFD ကုန်သွယ်လည်းထိုကဲ့သို့သောတံဆိပ်ခေါင်းခွန်အဖြစ်အချို့သောအခွန်များထံမှသင်တို့ shields ။ အခြားမည်သည့်ဘဏ္ဍာရေးတူရိယာစျေးကွက်နှင့်အတူကဲ့သို့ပင်ကုန်သွယ် CFDs အချို့အန္တရာယ်သယ်ဆောင်။
ယေဘုယျအား CFD ကုန်သွယ်စျေးနှုန်းလှုပ်ရှားမှုများသည်ခန့်မှန်းပြောဆိုချက်များကအမြတ်ဝင်ငွေကောင်းတစ်လမ်းရှိနိုင်ပါသည်။ သို့ရာတွင်ထိုသို့လိုအပ်သောစျေးကွက်သုတေသနပြုပါနှင့်ဤဈေးကွက်ထဲမှာငွေရှာဖို့သင့်လျော်သောကုန်သွယ်မဟာဗျူဟာတည်ဆောက်ရန်သင်တို့အပေါ်သို့ပါပဲ။
သွားရောက်ခြင်းအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့အခြား CFD ဆောင်းပါးကိုဖတ်ပါ။
"သင်အမြတ် Make မှရှောင်ကြဉ်ပါရှိရမည်ထိပ်တန်း5CFD ထရေးဒင်းအမှား"
By jerzy101 in CFD လမ်းညွှန် မတ်လ 26, 2020
By အမှတ် in ထရေးဒင်းသတင်းအချက်အလက်လမ်းညွှန် မတ်လ 25, 2020
By jerzy101 in ဒီဂျစ်တယ်ရွေးချယ်စရာလမ်းညွှန်များ မတ်လ 19, 2020